အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်များ - သင်တို့၏ ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်ကိုလေ့လာခြင်း
1) အဆိုပါအမျိုးသမီးလူကြီးရုပ်ရှင်ပွဲတော်စွမ်းဆောင်ရည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအခြားလူငယ်အမျိုးသမီးများ (2015) ၏နှိုင်းယှဉ် - ကောက်နှုတ်ချက်:
ကယ်လီဖိုးနီးယားအမျိုးသမီးများကျန်းမာရေးစစ်တမ်း (CWHS) မှအဆင်ပြေအောင်တစ်ဦးက Cross-Section စနစ်တကျအွန်လိုင်းစစ်တမ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုအင်တာနက်ကနေတဆင့် 134 လက်ရှိအမျိုးသမီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်အဆိုတော်တစ်ဦးအဆင်ပြေနမူနာဖို့ဖြစ်တယ်။ Bivariate နှင့် multivariate ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဟာ 1,773 CWHS မှတုန့်ပြန်တဲ့သူအလားတူအသက်အရွယ်မရွေး 2007 မိန်းမတို့အဘို့ဒေတာနှင့်အတူဤအမျိုးသမီးများအတွက်ဒေတာနှိုင်းယှဉ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဓိကရလဒ်အစီအမံ Self-အစီရင်ခံစိတ်ကျန်းမာရေး status ကိုရကြ၏။
အတိတ် 12 လအတွင်းမှာအဆိုတော်များ၏ 50% ကဆင်းရဲမွဲတေမှုနေထိုင်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့် 34% CWHS ဖြေဆိုသူအသီးသီး 36% နှင့် 6%, နှင့်နှိုင်းယှဉ်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကြုံနေရသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အရွယ်ရောက်သူအဖြစ်, 27% CWHS ဖြေဆိုသူ 9% နှင့်နှိုင်းယှဉ်အတင်းအဓမ္မလိင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
2) အဆိုပါလူကြီးရုပ်ရှင်ပွဲတော်နယ်ပယ်: ထိန်းညှိရန်အချိန်? (2007)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်အဆိုတော် HIV ပိုးနှင့်အခြားလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ (STDs) ၏ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်စံပြအခြေအနေများအတွက်အချိန်တိုတောင်းသောကာလကိုကျော်မျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်နှင့်အတူကြာရှည်နှင့်ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ။ အားလုံးပိုမိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမြင့်မား-အန္တရာယ်အလေ့အထများမြင့်တက်များမှာ  ။ ဤရွေ့ကားအလေ့အကျင့်တစ်ပြိုင်နက်နှစ်ဆထိုးဖောက်မှု (စအို-နှစ်ဆနှင့်အင်္ဂါဇာတ်-စအိုလိင်ဆက်ဆံ) နှင့်အကြိမ်ကြိမ်မျက်နှာသုက်ပါဝင်ကြောင်းလိင်အပြုအမူများပါဝင်သည်။
2004 များတွင်သာနှစ်ဦး 200 အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီများ [အားလုံး penile-စအိုနှင့် penile-အင်္ဂါဇာတ်ထိုးဖောက်မှုများအတွက်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းလိုအပ်2] ။ အဆိုတော်သူတို့အလုပ်အကိုင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကွန်ဒုံးမပါဘဲလုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်သည်ကသတင်းပို့သည်။ ဤရွေ့ကားအလေ့အကျင့်အဆိုတော်အကြား STDs များနှင့်ရံဖန်ရံခါတွင် HIV မြင့်မားဂီယာနှုန်းထားများဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။
3) အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်အဆိုတော် (2009) တွင်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ထိတွေ့ခြင်းမှလမ်းကြောင်း - ကောက်နှုတ်ချက်:
Los Angeles မြို့မှာရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့နှင့်ဥပဒေရေးရာစက်မှုလုပ်ငန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်းအနည်းငယ်သာကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များမှအရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်အဆိုတော် '' ထိတွေ့မှုနှင့် ပတ်သက်. လူသိများအခါနှင့်ဘယ်လိုကဤအန္တရာယ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, ဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်အဆိုတော်အကြားထိုကဲ့သို့အန္တရာယ်များရန်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များနှင့်လမ်းကြောင်းမှထိတွေ့သိရှိနိုင်ဖို့နှင့်အန္တရာယ်များကိုထိုကဲ့သို့သောယောက်ျားမိန်းမတို့အဖြစ်အဆိုတော်အမျိုးမျိုးအကြားကွဲပြားခြားနားပုံကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ semi-ဖွဲ့စည်းပုံမှာ In-depth ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်း 18 အမျိုးသမီးဆယ်အထီးအဆိုတော်အဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းကနေနှစ်ခု key ကိုသတင်းပေးတွေနဲ့ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
အကာအကွယ်မဲ့ဖြစ်ကြောင်း High-အန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်တိုးမြှင့်ထည့်သွင်းကြောင်းအန္တရာယ်များကျန်းမာရေးအပြုအမူတွေအတွက်စေ့စပ်အဆိုတော်။ သူတို့ကရုပ်ရှင်အစုံအပေါ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာထိတွေ့လျက်ရှိသည်။ အတော်များများကထဲသို့ဝင်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးမလုံခြုံမှုနှင့်အတူစက်မှုလုပ်ငန်း left နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုထံမှခံစားခဲ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များနှင့်ထိတွေ့ခံရဖို့ယောက်ျားထက် ပို. ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်အဆိုတော်, အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများ, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှများနှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများကန့်သတ်မထားစုပြုံကြောင့်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ထိတွေ့လျက်ရှိသည်။
4) အရွယ်ရောက်သူရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်း (2013) တွင်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများနှင့်အခြားအန္တရာယ်များ - ကောက်နှုတ်ချက်:
အဆိုပါအရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းယနေ့ခေတ်တရားဝင် Multi-ဒေါ်လာဘီလီယံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆိုတော်၏အဓိကကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များကိုကောင်းစွာသိကြသည်။ သူတို့ဟာအဓိကအားဖြင့်ယင်းသို့ HIV ပိုး, ဘီပိုး, gonorrhea အဖြစ်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများကူးစက်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်, ကလျမီဒီရာ, ရေယုန်များနှင့်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ။ H ကိုစက်မှုလုပ်ငန်း၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုကွန်ဒုံးစနစ်တကျအသုံးပြုခြင်းကိုငြင်းပယ်ဆက်လက်ကတည်းက owever ပုံမှန်နောက်ဆက်တွဲရှိနေသော်လည်း STD ၏ကြိမ်နှုန်းကဒီက high-အန္တရာယ်လူဦးရေအတွက်သိသာထင်ရှားသောနေဆဲဖြစ်သည်။ အပြင်အဆိုတော်လည်းမကြာခဏအများပြည်သူမသိရသည်အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုထိတွေ့လျက်ရှိသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်အရွယ်ရောက်သူရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အဆိုတော်များ၏အသိုင်းအဝိုင်းကြားတွင် STD နှင့်အခြားအန္တရာယ်များအကြောင်းကိုလူသိများသည်အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးပြည့်စုံပြန်လည်သုံးသပ်ပေးစွမ်းသည်။
5) အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်အဆိုတော်များ၏လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်စမ်းသပ်ခြင်း: ရောဂါလွဲချော်ခံရသလဲ? (2012) - ကောက်နှုတ်ချက်:
အဆိုတော်မကြာခဏအကာအကွယ်မဲ့ပါးစပ်နှင့်စအိုလိင်ဆက်ဆံအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေသောကြောင့် Undiagnosed လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု (အက်စ်တီအိုင်) ကအရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဘုံဖြစ်စေခြင်းငှါ, အက်စ်တီအိုင်မကြာခဏမျိုးကို Asymptomatic ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, စက်မှုလုပ်ငန်းဆီး-based စမ်းသပ်ခြင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အဆိုပါ4လလေ့လာမှုကာလအတွင်း 168 သင်တန်းသားများစာရင်းသွင်းခံခဲ့ရသည်: 112 (67%) အထီးခဲ့ကြသည် (56%) အမျိုးသမီးနှင့် 33 ခဲ့ကြသည်။ Gonorrhea နှင့် / သို့မဟုတ်လမိုင်ဒီးယ, 47 (28%) အမှုပေါင်းများအတွက်အပြုသဘောဆောင်စမ်းသပ်ပြီးသူ 11 (23%) တစ်ဦးတည်း urogenital စမ်းသပ်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြမှာမဟုတ်ဘူး၏။ နှင့် oropharynx ကူးစက်မှုအများဆုံးဆိုဒ် (42 / 168; 25%); Gonorrhea အသုံးအများဆုံးကာလသား (37% 47 / 79) ဖြစ်ခဲ့သည်။ သုံးဆယ့်ငါးဦး (95%) oropharyngeal နှင့် 21 (91%) rectal ကူးစက်မှုမျိုးကို Asymptomatic ခဲ့ကြသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းအဆိုတော်အက်စ်တီအိုင်၏မြင့်မားသောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ Undiagnosed မျိုးကို Asymptomatic rectal နှင့် oropharyngeal အက်စ်တီအိုင်ဘုံတို့အလုပ်ခွင်အတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ဖို့ transmission အတွက်ဖွယ်ရှိလှောင်ကန်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုတော်လက္ခဏာတွေမသက်ဆိုင်ဘဲမူလအားလုံးခန္ဓာဗေဒက်ဘ်ဆိုက်များမှာစမျးသပျရပါမည်နှင့်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကိုဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လုပ်သားများအကာအကွယ်ပေးရန်ပြဌာန်းရပါမည်။
6) မြင့်မားသောလမိုင်ဒီးယနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အဆိုတော်အကြား gonorrhea ဖြစ်ပွားမှုနှင့် reinfection (2011) - ကောက်နှုတ်ချက်:
အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်း (afi) အဆိုတော်ဝယ်ယူနှင့်လူ့ immunodeficiency virus ကို၏ဂီယာနှင့်အခြားလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများဖြစ်နိုင်ခြေတိုးမျိုးစုံမိတ်ဖက်နှင့်အတူပါးစပ်အကာအကွယ်မဲ့လိင်အင်္ဂါနှင့်စအိုလိင်ဆက်ဆံအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ။ လက်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းအလေ့အကျင့်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကိုမလိုအပ်ပါဘူး, အစားကန့်အသတ်စမ်းသပ်ခြင်းတို့အပေါ်မှာမူတည်သည်။ ကျနော်တို့နှစ်စဉ်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာကလျမီဒီရာ၏ဖြစ်ပွားမှု (မှန် CT) နှင့် gonorrhea (GC) ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် afi အဆိုတော်အကြား reinfection နှုန်းအကဲဖြတ်ရန်ရှာ၏။ afi အဆိုတော်အကြားမှန် CT နှင့် GC ၏နှစ်ပတ်လည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာအဖြစ်အပျက်တွေအဘို့အနိမ့်ဘောငျအသီးသီး 14.3% နှင့် 5.1% ဖြစ်ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ 1 တစ်နှစ်အတွင်းအဆိုပါ reinfection မှုနှုန်း 26.1% ဖြစ်ခဲ့သည်။
မှန် CT နှင့် GC ကူးစက်မှုအဆိုတော်အကြားဘုံနှင့်အမှုများထပ်တလဲလဲဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးတည်းစမ်းသပ်ခြင်းထိရောက်စွာအလုပ်ခွင်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်မတားဆီးပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုမြှင့်တင်ရေးအပါအဝင်ထိန်းချုပ်ရေးမဟာဗျူဟာများ, ဤစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လုပ်သားများကာကွယ်ပေးရန်လိုအပ်နေပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများမှအပေါ်ပိုပြီးတာဝန်နေရာကြောင်းဖြည့်စွက်ဥပဒေပြဌာန်းအဆိုတော်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ကျန်းမာရေးကိုသေချာစေရန်လိုအပ်ပါသည်။
7) ဒီလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာမင်းဟာမင်းမဟုတ်တော့ဘူး” ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိအပြာစာပေထုတ်လုပ်မှုတွင်အမျိုးသမီးများ၏အတွေ့အကြုံများကိုလေ့လာခြင်း (၂၀၂၁) - Abstract
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒေါ်လာဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းအမျိုးသမီးများရင်ဆိုင်နေရသောအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်မျှသာသိရှိရသည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေထုတ်လုပ်မှုတွင်အမျိုးသမီးများ၏အတွေ့အကြုံများကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်း ၀ င်ရောက်ခြင်း၊ အတင်းအကျပ်ပြုခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ လက်ရှိလိုအပ်ချက်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းမှထွက်ခွာရန်မည်သည့်အတားအဆီးများကိုအထူးအာရုံစိုက်သည်။ Semi- စနစ်တကျနက်ရှိုင်းသောအင်တာဗျူးများကိုဆွီဒင်နိုင်ငံရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံရှိသောအမျိုးသမီးကိုး ဦး နှင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပါဝင်သူများသည်ငယ်ရွယ်သောအသက်အရွယ်၊ ငွေရေးကြေးရေးလုံခြုံမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမကောင်းကြောင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်အမျိုးသမီးများသည်ညစ်ညမ်းဓာတ်ပုံရိုက်သူများနှင့်ညစ်ညမ်း ၀ ယ်သူများ၏ခြယ်လှယ်ခြင်းနှင့်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းမှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့်ကိုယ်ပိုင်နယ်နိမိတ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ခက်ခဲစေသည်။ အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းတွင်လိင်ဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကို ၀ ယ်ယူရန်တောင်းဆိုမှုများကိုပေးပို့သည့်ညစ်ညမ်း ၀ ယ်သူများအားအမျိုးသမီးများသည်ပုံမှန်နှောင့်ယှက်မှုခံနေရသည်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ရဲ့အားနည်းချက်ကများလေလေညစ်ညမ်းဓာတ်ပုံဆရာနဲ့ညစ်ညမ်း ၀ ယ်သူရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုခုခံတွန်းလှန်ဖို့ပိုခက်လေပဲ။ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းနှင့်အခြားသောလိင်ဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများမှာများသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေထုတ်လုပ်မှုကိုစွန့်လွှတ်ရန်အတွက်သိသာထင်ရှားသောအတားအဆီးတစ်ခုမှာသူ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်အကန့်အသတ်မရှိရှိနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလုပ်ငန်းကိုစွန့်ခွာရန်နှင့်စစ်မှန်သောအခြားရွေးချယ်စရာများကိုရယူရန်သင်တန်းသားများသည်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းသင်တန်း၊ နောက်ထပ်ပညာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု၏အရေးကြီးပုံကိုအလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေထုတ်လုပ်မှုတွင်အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့ရသောအခြေအနေကိုဖော်ထုတ်ရန်ဤလေ့လာမှုသည်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ မူဝါဒချမှတ်ခြင်းနှင့်ဤအားနည်းချက်ရှိသည့်လူ ဦး ရေအတွက်ထိရောက်သောပံ့ပိုးကူညီမှုဝန်ဆောင်မှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အန္တရာယ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်နောက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သည်။